Audiense Unganidzo: Iyo Yakanyanya Mberi Twitter Kushambadzira Platform ye Enterprise | Martech Zone
Kunyangwe hazvo pasirese yakagamuchira mamwe masocial media chiteshi, ini ndinoramba ndiri fan hombe yeTwitter. Uye Twitter inoenderera mberi nekubatsira kutyaira traffic kune angu ega uye ehunyanzvi saiti saka ini handife ndakazvipa iyo chero nguva munguva pfupi!
Audiense Unganidzo chikuva chakavakirwa zvebhizimusi Twitter Kushambadzira uye kuvimbwa nezviuru zvemabhurandi nemasangano pasi rese ku:
Community Management uye Ongororo - Wana ruzivo rwakakwana nezve nharaunda yako pa Twitter. Ziva kuziva vateveri vako zvakadzama uye pindirana zvakanaka navo
Chatbots & Nhepfenyuro - Uine Audiense Connect's Chatbot muvaki, unogona kugadzira yako yekupinda-mukati chatbot mune mashoma mashoma. Shingairira nevanyori vako / vatengi zvakananga.
Yepamberi yekutarisa & Kuteerera - Yakazara yepasi rose kufukidzwa kweicho chaicho-nguva uye nhoroondo (kubvira 2006) Twitter zvemukati. Audiense inopa ongororo yekutaurirana uye kamwe-tinya mushandirapamwe wekutarisa.
Twitter Yakagadzirirwa Vateereri Ekushambadzira - Gadzira vateereri veTwitter vanoita mushe pamusika. Hazvina mhosva kuti niche kana yakafara sei vateereri vako. Nguva dzose-pane kuwiriranisa neako Twitter Ads account.
Audiense Batanidza Zvimiro
Nguva yakanakisa yekuTwitter - Tsvaga kuti ndeipi nguva yako yakanakisa yekutumira uye tora mukana wega wega tweet yaunotumira. Tora yakanakisa tweet-nguva kubva kune yakasarudzika sampuro yevashandisi uye dzidza kana vateereri vako vari online.
Bhurawuza Yako Twitter Nharaunda - Wana ruzivo rwakakwana nezve nharaunda yako nenzira dzakasiyana, svika pakuziva vateveri vako zvakadzama uye pindirana zvakanaka navo. Maka ivo uye wedzera ruzivo rwe Twitter.
Twitter Sefa, Tevedzera, uye Tevera - Tsvaga vateveri vako vatsva uye vateedzere zviri nyore kumashure. Iva akangwara uye ane tsika. Dzorera zvinotevera kana iri mutemo wako. Tsvaga shamwari dzine ruzha, vangangoita spammers, uye vashandisi vasina basa. Ndokumbira utarise kune iyo Twitter mitemo uye marongero.
Twitter Mukwikwidzi Kuongorora - Enzanisa kusvika kune mamwe maakaundi eTwitter kana vakwikwidzi kuitira kuti iwe uone kuti ndiani ane vateveri vazhinji uye ndivanaani, avo vanoshandisa mamwe maTweets, izvo zvavanowanzo tweet nezvazvo.
Twitter Vateereri uye Nharaunda Kunzwisisa - Kana iwe uchida kuziva mhando yenharaunda yako yeTwitter iyi ndiyo mushumo wakakwana: nguva yenguva machati, machati emitauro, vashandisi nenhamba yevateveri, vashandisi nezviitiko zvechangobva kuitika, nezvimwe.
Manage Twitter Lists - Ronga vateveri vako uye shamwari nekugadzira Twitter zvinyorwa. Shingairira nevanhu vanokodzera kuti uwane nzira inoshanda yekutaurirana.
Twitter Yekushandisa otonga Muvaki - Chengetedza nguva nekugadzira otomatiki mitemo kana mumwe munhu akakosha achizobatana newe. Semuenzaniso: kukutumira email kana mumwe munhu ane vateveri vanopfuura makumi maviri vanokutevera. Akangwara, handiti?
Twitter Direct Meseji Chatbots uye Nhepfenyuro - Uine Audiense Connect's Chatbot muvaki, unogona kugadzira yako yekupinda-mukati chatbot mune mashoma mashoma uye unobatana nevanyori kana vatengi kuburikidza neTwitter uchishandisa Direct Meseji otomatiki.
Tweet Analytics - Komberedza iyo yemahara Analytics iyo Twitter inopa nekunzwisisa kwakazara kwekuti ndiani anobata nema tweets ako ari nani. Vawedzere kune zvinyorwa, kana kunongedza ivo kuburikidza neVateereri veTailored mumakampeni anotevera.
Twitter Kupindirana Mushumo - Tsvaga mharadzano dzinonzwisisika uye unzwisise hukama pakati pevateereri kuti uwane hungwaru hwaunoda kuti utarise pane chaiwo vateereri. Ona mashandiro ehurongwa hwehukama hweumwe neumwe uye ona kuti ndeapi maakaundi anobva kumakambani akafanana ane nhamba yakafanana yevashandisi.
Twitter Nyaya Yehukama - The Affinity Report inopa inoonekwa nzira yekunzwisisa zvirinani zvido zvevateereri vako uye nekudaro ita sarudzo dzakajeka nezve zvemukati zvemukati izvo zvinoenderana uye nekubata vateereri ava. Mhanya nehukama Chirevo kuti uone kuti vateereri vanoteedzera zvakanyanya uye zvishoma pane Twitter.
Twitter Yepamberi Vateereri Mutariri - Kurumidza uye nesimba kusanganisa mafirita sarudzo yemushandisi-profiles, hukama hwehukama, uye zviitiko zvevashandisi kugadzira vateereri vane hunyanzvi vanovandudza kukosha uye mashandiro eako Twitter Ads uye Organic mishandirapamwe.
Twitter Kuongorora - Yakazara yepasi rose kufukidzwa kweicho chaicho-nguva uye nhoroondo (kubvira 2006) Twitter zvemukati. Audiense inopa ongororo yekutaurirana uye kamwe-tinya mushandirapamwe wekutarisa.
Twitter Yakagadzirirwa Vateereri - Gadzira vateereri veTwitter vanoita mushe pamusika. Hazvina mhosva kuti niche kana yakafara sei vateereri vako. Nguva dzose-pane kuwiriranisa neako Twitter Ads account.
Edza Audiense Unganidzo
Tags: audienceaudiense batanidzayakanakisa nguva ye tweettweet analyticsTwittertwitter kushambadziratwitter hukama hwehukamakuongorora kwe twittertwitter vateereri manejimendiTwitter Mashandisirotwitter chatbottwitter nzanga nzwisisotwitter nharaunda manejimenditwitter mukwikwidzi kuongororatwitter dashboardtwitter yakananga meseji bottwitter yakananga meseji chatbottwitter teveratwitter nzira yekupindiranatwitter runyorwa manejimenditwitter kuongororatwitter yekupindura mutemotwitter inotongatwitter yakagadzirirwa vateereritwitter unfollow
Limit Jetpack's Inoenderana Zvinyorwa Kune Rimwe Zuva